MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: လူထုပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ KIO ရဲ့အကြံပေး အဖွဲ့ကို ကချင်လူမှုအဖွဲ့အစည်း များ၏ အမြင်နှင့် မျှော်လင့်ချက်
အစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ KIO ကြား စစ်ရေးတင်းမာမှု ပဋိပက္ခများ နှစ်ဖက် အရှိန်ဖြေလျှော့ဖို့ရန်နှင့် အဓွန့်ရှည် တည် တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေး ဖက်ကို အမြန် ဆုံးဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ကချင် လူထုပါဝင် သည့် ငြိမ်း ချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး အကြံပေး အဖွဲ့ Technical Advisory Team ရုံးကို ဇူလိုင် ၂၃ ယမန်နေ့ တရားဝင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Technical Advisory Team အပေါ် ကချင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအမြင်ဘယ်လိုရှိပါလဲ? ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကချင်အဖွဲ့အစည်း (၃) ဖွဲ့နဲ့ သူတို့ရဲ့ အမြင်သဘောထားတွေကို KNG ကချင်သတင်းဌာနမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
၁။ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်မှာ ဒီလို Technical Advisory Team အဖွဲ့အစည်းမျိုးက တကယ်အရေးကြီးတယ်လို့ မြင်ပါလား၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ?
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ယက် (KPN) မှ Coordinator ဒေါ်ခေါန်ဂျာက - “အရေးကြီးမှုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အမှန်တကယ်အားဖြင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာ ၁ ရက် ၂ ရက် အဲလောက်ပဲကြာတာပေါ့နော်။ တကယ်စားပွဲပေါ်မှာဆွေးနွေးတဲ့အချိန် သို့သော်လည်းပဲ ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၆၀ မကတော့ဘူး။ အဲတော့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ လောက်တိုက်နေတဲ့ကိစ္စကို ဒီစားပွဲပေါ်မှာ ၁ ရက် ၂ ရက်ပဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒါ ကြေကြေလည်လည်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ ကဏ္ဍကိုရောက်မှာ မဟုတ်ဘူးရှင့်။ အဲတော့ ဒီလို Technical Team ကို ဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့် ဒီလိုမျိုး ပြည်သူလူထုကဘာဖြစ်နေလဲ လက်ရှိမှာဘာဖြစ်နေလဲ အနာဂတ် အလားလာ ဘာရှိမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကို ကြေကြေလည်လည် လေ့လာသုံးသပ်ပြီး တကာလမှာ အကြံပြုချက်များကို ကိုယ်စားလှယ်တော်များကိုပေးသွင်းခြင်အားဖြင့် ဒီအနှစ် ၆၀ ကျော်ကြာတဲ့ ပြဿနာတွေအကုန်လုံးရဲ့ အနစ်သာရကိုဆွေးနွေးပြီးတကာလ ကောင်းမွန်တဲ့အကြံပြုချက်များ ကိုလည်း ပေးနိုင်မယ်လို့ ယူဆတယ်။ အဲဒါမျိုးသာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် စားပွဲပေါ်မှာ အနှစ် ၆၀ စာတိုက်ခဲ့ကြတဲ့ကိစ္စတွေကို နာရီပေါင်း ၆၀ သို့မဟုတ်ရင် နာရီပေါင်း ၁၀၀ လောက်နဲ့ပဲ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင် ကျမတို့လစ်ဟာနေတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိမယ်ပေါ့။”
တကယ်ပဲ ဒီအဖွဲ့က ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား?
“Technical team ဖွဲ့စည်းခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ အချက် ၂ ချက် ကတော့ ပြည်သူလူထုက ဘာကိုအမှန်တကယ်လိုချင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှ အဲဒီအသံကိုပါဝင်အောင်လုပ်ခွင့်ပေးဖို့ နောက်ပြီးမှ ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်နိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုပြီးမှ Team ကိုဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ အဲတော့ အဲ ၂ ချက်ဟာ ပြည်သူလူထုပါဝင်ဖို့ဆိုပြီး ဒီတိုင်းပါးစပ်နဲ့ပြောပြီး ပါ ပါ၊ ပါ ပါ လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ အမှန်တကယ်ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို ဘယ်လမ်းကြောင်းကနေပါဝင်မလဲဆိုတာ Frame ကိုဖွင့် ထားပေးတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ တကယ်ပဲလက်တွေ့ဆန်တဲ့ငြိမ်းချမ်း Process ဖြစ်တယ်လို့လက်ခံပါတယ်ရှင့်။”
Technical Advisory Team အကြံပေးအဖွဲ့ ကိုဖွဲ့စည်းလာနိုင်တာ အလားလာကောင်းတယ်လို့မြင်ပါလား?
“မေလ ၂၉-၃၀ မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးထားတဲ့ သဘောတူညီချက် (၇) ချက်က နံပါတ် ၆ အချက်ကို ပြည့်စုံစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဒီသဘောတူချက်တွေကို အကောင်ထည်ဖော်လာတယ်ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲက ရလဒ်တွေကို အကောင်ထည်ဖော်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြောင့်မို့လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဘက်ကိုပိုပြီးမှနီးစပ်စေတာလို့ ပိုပြီးတော့သဘောပေါက်ပါတယ် လက်ခံပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ Technical Team ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအကြောင်းရင်း ကတော့ ဒီ KIO ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တော်များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အကယ်၍များ ငြိမ်းချမ်းရေးစားပွဲမှာ တိုက်ရိုက်မပြောနိုင်တဲ့ အရာတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖြေရှင်း ကိုင်တွယ်ပေးထားနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဆွေးနွေးရေးတွေ ပိုမိုသွက်လက်လာမယ်လို့လည်းယူဆတယ်ပေါ့။ ပြေပြစ်ချောမောလာမယ်လို့လည်း ယူဆတယ်။”
Technical Advisory Team ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဘာတွေဖြစ်မလဲ? ဘယ်လို ပါဝင်သွားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်လဲ?
“ခုလို Technical Team ဖွဲ့လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ်ထောင့်ကမှမကျန်အောင် ပြည်သူလူထုရဲ့အသံလည်း မကျန်အောင်ပေါ့။ အကုန်လုံးကို စုစည်းတင်ပြပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ ပိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိစေမှာဖြစ်တယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် သွက်လက်လွယ်ကူမြန်ဆန်စေမယ်လို့ ယူဆပါတယ်ရှင့်။ Technical Team ကိုသူ့ချည်းပဲ ဒီတိုင်းပဲပစ်ထားကြမှာမဟုတ်ဘူးရှင့်။ ဒီ Technical Team ပြန်လည် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ဖို့အတွက် ကချင်အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်များအနေနဲ့ စုရုံးပြီးသကာလ အတူတကွ စည်းလုံးတဲ့ညီညွတ်တဲ့နည်းနဲ့ နည်းပညာ အားဖြင့်အကြံပြုနိုင်မယ့် Thematic Group ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကြမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ကတော့ ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်အလိုက် သီးသန့် သီးသန့် ပညာရှင်များထွက် ပေါ်လာဖို့အတွက် Civil Society မှာပါဝင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်များကနေပြီးမှ ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ကူညီကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ အဲလိုအဖွဲ့တွေကနေကူညီခြင်းအားဖြင့် Technical Team က ပိုမိုအားကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီ Thematic Group မှာ တောင်မှ လိုအပ်တဲ့ပညာရပ်များ နည်းပညာများကျွမ်းကျင်မှုများ မရှိဘူးဆိုရင်တော့မှ ကျမတို့ ဒီ Technical Team အတွက် ပြင်ပကပညာရှင်များ ငှားရမ်းပြီးတော့ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်ပေါ့။ အဲသလိုဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် လူထုရဲ့အသံလည်းပါဝင်မယ် လူထုရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုလည်းပါဝင်မယ် နည်းပညာ အားဖြင့်လည်း ကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာကိုင်တွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ အဲကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့တကယ်တမ်းရရှိဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတဲ့ ဒီ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကလည်း ရေရှည်တည်တံ့ပြီးတော့မှ အဓွန့်ရှည်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ဒီဖြစ်စဉ် တလျှောက်လုံးမှာလည်း မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့အရာမျိုးမရှိပဲနဲ့ ပိုမိုပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်ကိုင်သွယ်သွားနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင့်။”
၂။ Technical Advisory Team ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေက နှစ်ဖက်ပဋိပက္ခတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် အကြံပေးအဖွဲ့မျိုးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်လား?
ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ (PCG)မှ ဦးအင်ရှန်ဆန်အောင် က - “နောင် အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ လုပ်တဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရော စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရော ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ အကုန်လုံးလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကြားထဲမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးမှ Technical Team ကို ဖွဲ့စည်းဖို့ရည်ရွယ်ထားတာ။ ပြီးတော့ အစိုးရဖက် ကလည်း Myanmar Peace Center ဆိုပြီးမှ Technical Team သဘောမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဒီ KIO ကိုယ်စားလှယ်တွေက MPC နဲ့ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ KIO ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဆွေးနွေးမယ် KIO ဖက်က Technical Team နဲ့ မြန်မာအစိုးရဖက် ကတော့ Myanmar Peace Center နဲ့ အဲလိုကြိုတင်ပြီး ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးမှ ဆွေးနွေးပွဲတခုအတွက်လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုလေးတွေလုပ်သွားဖို့ အတွက် ဒီ Technical Advisory Team ကိုဖွဲ့စည်းရတာလည်းဖြစ်တယ်။ အစိုးရရဲ့ Myanmar Peace Center နဲ့ နောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက် ကြိုတင်ဆွေးပြင်ဆင်မှုလေးတွေကလည်း မကြာခင်မှာပဲ ပြုလုပ်လာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ပြီးရင်တပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေမှာလည်း လိုအပ်ရင် ဆက်ဆံရေးရုံးဆိုတာမဖွင့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဆက်ဆံရေးရုံးအစားလည်း လိုအပ်တဲ့ ဖြေရှင်းမှုလေးတွေ ကတော့ တဖက်တလမ်းက ဆက်ဆံရေးကဏ္ဍကလည်း ဆက်ဆံရေးရုံးမဟုတ်ပေမယ့် အဲဒါလည်း လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ စစ်ရေးအရှိန်လျှော့ဖို့ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ မဖြစ်ဖို့အတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။ နောင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ အတွက်လည်း ဒီ Technical Team အဖွဲ့က အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ရပါတယ်။”
ဘာဖြစ်လို့ ဒီအဖွဲ့မျိုး လိုအပ်တယ်လို့မြင်ပါလဲ?
“အစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေပဲ ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ ၁ ခေါက်ဆွေးနွေးလိုက် နောက်တခါကျတော့ ဟို ကြားထဲမှာ လက်တွေ့ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလုပ်တာ နည်းနည်းလေးနှေးကွေးမှုရှိတာတွေ့ရတယ်။ အဲဒီခါကျတော့ မြန်ဆန်သွားနိုင်အောင် ဆိုပြီးမှ ကြားထဲမှာ တရားဝင်ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုက မြို့ပေါ်မှာရှိဖို့လိုအပ်တဲ့သဘောရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ သူတို့ရဲ့ Technical Team ကိုမြို့ပေါ်မှာထားခြင်းအားဖြင့် သဘောတူထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့က အထောက်အကူပြုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ သူတို့ကလည်း အဲလိုမျှော်လင့်ပြီးမှ ဖွဲ့စည်းရတာ။”
ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ လူထုဖက်ပါဝင်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍက ဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲ?
“ငြိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍမှာ ဆန္ဒပေးချင်တဲ့လူ အကြံအညာဏ်ပေးချင်တဲ့လူတွေကလည်း ခု Technical Team ရုံးဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ လူထုနဲ့ဆက်ဆံရေး တာဝန်ယူတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေ သပ်သပ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းလည်း ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ ပါဝင်နိုင်တယ် ဆွေးနွေးနိုင်တယ် အကြံပြုနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ဟာကို ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့အတွက်ကြောင့် လူတိုင်းလည်း ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်လာတာ တွေ့ရတယ်လို့ ကျွန်တော်အဲဒါလေးပြောချင်ပါတယ်။”
၃။ Technical Advisory Team ထဲမှာ လူထုဘယ်လိုပါဝင်သွားသင့်တယ်လို့ ထင်လဲ?
ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက်မှ အတွင်းရေးမှူး (KDNG) မှ စားဂျီ - “ဒီရုံးဖွင့်တာက ဘက်ပေါင်းစုံက ပါဝင်နိုင်ဖို့က အရေးကြီးတယ်။ ဘယ်လိုလူတန်းစားတွေ ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေ အောက်ခြေအဆင့်ကနေ ပညာရှင်အဆင့်ထိပေါ့နော်။ ဒီလိုမျိုး ဘက်ပေါင်းစုံက ရှုထောင့်စုံက အရပ်အသားအဖွဲ့စည်း၊ လူထုအခြေပြု၊ အဓိက လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ပါဝင်နိုင်ဖို့က အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ အဲဒီပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းသော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်သော်လည်းကောင်းက ဘာတွေအကြံပြုနိုင်မလဲ ဘယ်လောက်ထိ ဘာ Topic ဘာခေါင်းစဉ်တွေနဲ့အကြံပြုမလဲ? သူ့ဆီမှာရှိတဲ့ အချက်အလက်က ဘာတွေလုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ဟာတွေ တိတိကျကျဖြစ်တဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ Topic တွေ ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ အကြံပြုသွားနိုင်လို့ရှိရင်က အင်မတန်မှကောင်းတာပေါ့နော်။ ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်နိုင်တဲ့ ကိုယ့်ဆီက အချက်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ရင်တော့ တော်တော်ကောင်းမယ့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်မယ်။ ဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးရလဒ်တော့ရှိမယ်။”
“တခုက ဒီ Technical Team ဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့် အနာဂတ်နိုင်ငံရေးအတွက် ဘယ်လောက်ထိ အကျိုးသက်ရောက်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတော့ တပိုင်းဖြစ်မယ် အဲဒါက အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အိုပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ အစိုးရဘက်ပေါ့နော် ဒီအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမယ် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပိုမိုရရှိစေမယ် ဆိုတဲ့အပိုင်းက နောက်တပိုင်းဖြစ်နေတယ် အဲဒီအပိုင်းက အဓိကအိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ အစိုးရဘက်က ဘယ်လောက်ထိ အလေးထားဂရုစိုက်မလဲ ကချင်ပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားတွေ ဒီလိုမျိုး Technical Team တွေ ပါဝင်အကြံပြုတဲ့အချက်အပေါ်မှာ သူတို့ဘယ်လောက်ထိအလေးထားဂရုစိုက်မလဲ ဆိုတဲ့အချက်မှာမူတည်သွားလိမ့်မယ်။”
at 7/24/2013 08:18:00 PM